Ikhaya STARS E-EUROPE I-Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Abancane". Indaba yethu ye-Ashley Young Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuqala yokuphila ngaphambi kobukhosi, ubuhlobo bomshado, impilo yomndeni, amaqiniso, ubuhlobo bomndeni kanye nokuphila komndeni kanye namanye amaqiniso angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe ahlukahlukene kodwa abambalwa bacabanga nge-biography ka-Ashley Young okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U-Ashley Simon Young wazalwa ngosuku lwe-9th kaJulayi 1985 eStevenage, e-United Kingdom. Wazalwa ngeCancer kubazali base Jamaica, uMnu noMnu. Luther Young.
Omncane waya kuJohan Henry Newman School eStevenage. Yilapho aqala khona ukudlala ibhola. Eqinisweni, u-Young wadlala ibhola lezemidlalo kanye nomshayeli weFormula One, uLee Hamilton, owayengumnyaka ofanayo.
Wayengekho kude nebhola kusukela ebuntwaneni bakhe. Wazalwa futhi wakhulela eHertfordshire futhi waqala umsebenzi wakhe osemusha eneminyaka engu-10 eWatford. Ube yiqembu lokuqala elivamile ku-2004-05 futhi wayengomunye wabadlali abalulekile be-Watford esikhathini sawo sokunyusa-2005-06.
U-Young waqhubeka nokudlala kahle iWatford ePrincess League, kanti ngoJanuwari 2007 wadlulisela e-Aston Villa. Wazimisa eqenjini lokuqala e-Villa Park futhi wanqoba umklomelo we-PFA Young Player on Year ku-2009. Ngo-23 Juni 2011, osemusha wasayina i-Manchester United ngemali engakaziwa. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ukuphila kobudlelwane buka-Ashley Young buphakathi komuntu oyedwa. Akekho omunye umuntu kunomngane wakhe othandekayo, uNicky Pike. Bobabili baqala ukuphola lapho besesesikoleni.
Izinyoni ezimbili zothando - u-Ashley Young noNicky Pike
U-Ashley Young wake wazama ukugubha inkathi yakhe yokumisa eManchester United ngokugcina ukubopha iphoyinti ngothando lomntwana uNicky Pike. Kodwa-ke, kwenzeke okubi.
I-wing yase-England yashiya abangane nabomndeni beshaywa lapho eshiyile umkhosi wakhe we-£ 200,000 womshado ngaphandle kwamahora ahlaza okwesibhakabhaka nje ama-48 ngaphambi kosuku olukhulu ku-2011. Isizathu sokumisa umshado wakhe sisalokhu singaziwa. Noma kunjalo, isinqumo sakhe sokugcina sashiya zombili imindeni enezinyawo ezibandayo.
U-Ashley wakhiwa emva kweminyaka emine kamuva. Wabeka omunye umshado futhi waqhubeka eshada noNicky Pike.
U-Ashley Young ekugcineni ushada noNicky Pike
Bobabili imibhangqwana inabantwana ababili ndawonye, ​​indodana engu-9 ubudala uTyler nendodakazi encane uSarna.
Umndeni omuhle ka-Ashley Young
Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts -nezimpikiswano
Ekupheleni kwe-2017, Young futhi Alli bebevele behileleke emdlalweni we-30th ngomzuzu ngesikhathi iManchester United iwina ukunqoba uTottenham ngemuva kokuthi uMnuz Young ebambe ukuthi ubanjwe ebusweni noSpres Aurier. Alli wabamba iqhaza futhi wahamba enhloko neNtshonalanga ngaphambi kokuthi abadlali bezinhlangothi zombili bahlanganyele ngesikhathi se-melee yokuqala.
Izenzo eziphakathi kuka-Young no- Alli uqhubeke ngemuva kommeli uJon Moss uzame ukususa lesi simo. Ababheki baqonda lokho Alli wazisa i-32 oneminyaka engu-ubudala okufanele 'uthatha umhlalaphansi ngesakhiwo se-zimmer'. Intsha, eyinqobe i-Premier League, FA Cup, League Cup ne-Europa League ne-United, ikholakala ukuthi iphendule ngokucebisa Alli hhayi ukukhuluma naye ngokungahloniphi kuze kube yilapho ezuzile okuthile.
Intsha iphetha ukuphikisana ngokutshela u-Alli: "Ngitshele uma unqoba i-Prem." Izenzo zizwakala ukuthi ziye zaqhubeka emgodini emva komdlalo owawuthanda u-Young.
Insizwa ihleka usulu AlliUmlomo emva komdlalo i-tweet efundeka kanje: "Great Team Spirit. Umphumela omuhle kakhulu. Ukukhuluma akusizi. "
Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
UTABA: Ubaba wakhe waseJamican, uLuther Young usekela iTottenham Hotspur. ULuther usampulile kakhulu umndeni wakhe-kuzo zonke izici umdlalo omuhle okufanele anikele ngawo.
UMAMA: U-Ashley Young's Jamaican umama kaSharon akenzi lutho ngaphandle kokuthumela amabhokisi enkukhu yaseJanuk ayithandayo ekhaya ephekwe ekhaya kanye namaJicican aqoshiwe. Emazwini amancane ... "Ukudla kungikhumbuza ngobuntwana. Kuyathokozisa ukuba namagugu ami omama nobaba avela eJamaica. Lapho sakhula okwakungcono kakhulu engangikudlayo. Ingikhumbuza ngomlando wami ".
USharon Young nomyeni wakhe basaphila phansi eningizimu ngenkathi u-Young yena esenyakatho eManchester.
ABAKHAYA: Unomfowethu omdala (uMartin Young) osekela u-Arsenal. Iqhawe lakhe kanye nomlingisi wakhe kanye no-Ian Wright. Futhi, U-Ashley unabo ababili abadlali abasha bebhola, uWilliam Young, owakha i-Watford ngo-2008, kanti uKyle Young, ngo-Ephreli 2009 wayeqeqesha e-Arsenal Academy.
Yebo, BANGABASEBENZINI abancane, kodwa okuhlangenwe nakho lo mndeni kunayo ibhola kungalingani. UMartin Young uneminyaka engu-6 emdala kune-Ashley. U-Ashley uneminyaka engu-4 emdala kuneLee Lewis no-Lewis iminyaka engu-7 emdala kunoKyle.
U-Lewis wakha umsebenzi wokuhlala isikhathi eside ngokuthandwa kweBurton, Northampton futhi manje uCrawley. Bobabili uMartin noKyle bobabili babone amaphupho abo ochwepheshe ahlasele ngezizathu ezihlukahlukene. I-quartet ihlala ixhumana nsuku zonke ngezingxoxo zeqembu le-Whatsapp, noLee no-Ashley ngokuqinile kakhulu ngenxa yobuhlobo babo obudala kanye noshintsho lwabo lwamuva lwama-post kusuka kwiseyili lokubuyela emuva.
Ngempela, ngokudlala iNgilandi nokuwina isihloko seNdunankulu, ukuyiqeda emaqenjini aphansi, ukulimala okulimazayo inhlanhla yokuchitha umsebenzi ngaphambi kokuba iqale - abaseNtshonalanga bayibonile konke.
Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts -Ubuntu
U-Ashley unomdlavuza futhi unezici ezilandelayo kumuntu wakhe wezinkanyezi;
Amandla ka-Ashley Young: Ukuziqhenya, ukucabanga okukhulu, ukwethembeka, ukuzwela, ukuzwelana nokukholisa.
Ubuthakathaka buka-Ashley Young: I-Moody, ukungathembeki, okusolisayo, okukhohlisayo nokungaphephile.
Lokho u-Ashley Young akuthandayo: Ubuciko, izinto zokuzilibazisa ekhaya, ukuphumula eduze noma emanzini, ukusiza abathandekayo, isidlo esihle nabangani
Okushiwo ngu-Ashley Young: Abafokazi, noma yikuphi ukugxeka kukaMama, ukuveza impilo yomuntu siqu.
Ashley Young Ingane Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphikisa izinsolo
U-Ashley Young ubelokhu ebizwa ngokuthi yi-master of diving ku-Premier League. Uye wabhekwa ngokusobala ngokushayela umshini. Ngaphezu kwalokho, u-Young useke wavuma kwabaphathi beSir U-Alex Ferguson futhi UDavid Moyes mayelana nokudilika ukuze uthole inzuzo engalungile.
Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Ashley Young Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!